Yakarembera: A Neural Yemunhu + Muchidimbu Mhinduro Loop yeShanduro uye Yemunharaunda | Martech Zone
Lilt: A Neural Yemunhu + Mashini Mhinduro Loop yeDudziro uye Yemunharaunda
China, November 2, 2017 China, November 2, 2017 Douglas Karr
Lilt yakavaka yekutanga neural yevanhu + muchina mhinduro loop yekushandura. Lilt's neural muchina shanduro (NMT) system ndiyo yekutanga yerudzi rwayo muindasitiri yehunyanzvi hwekushandura uye inopfuura zvinopihwa kubva kuGoogle, Amazon, Facebook, Apple, kana Microsoft. Mabhizinesi ari kuda kuwedzera kusvika kwavo kwepasirese izvozvi vane sarudzo iri nani yekududzira zvirimo nekukurumidza uye nenzira kwayo.
Kana zvasvika pakuturikira, mabhizinesi anga aine sarudzo mbiri chete:
Mutsara wakazara shanduro yemuchina seGoogle Dudziro.
Lilt inogonesa akanakisa epasirese epasi nekusanganisa njere dzesimba nesimba revanhu kuti vawane mhando yemhando yepamusoro yeshanduro inowanikwa. Lilt's NMT sisitimu inoshandisa iyo imwecheteyo tekinoroji iyo iri kutoshandiswa kushandiswa kufambisa kutaura nekuratidzwa kwemifananidzo, asi iyo kukanganisa kune indasitiri yekushandura iri itsva uye inovimbisa. Mumwedzi ichangopfuura, NMT yakarumbidzwa nenyanzvi dzeindasitiri nekugona kwayo kuenzanisa mhando yeshanduro yevanhu nehurongwa hutsva hwaLilt hazvisi izvo.
MuLilt's neural feedback loop, vashanduri vanogamuchira mamiriro-anoenderana neNMT mazano pavanenge vachishanda. Sangano reNMT rinongotarisa zvido zvemushanduri kuti agadzirise mazano ake munguva chaiyo. Izvi zvinogadzira kutenderera kwakanaka umo vashanduri vanogamuchira mazano ari kuwedzera zvirinani, uye muchina unogamuchira mhinduro iri kuwedzera zvirinani. Iyo neural mhinduro loop inoguma mune yepamusoro mhando hwevanhu uye mushanduri shanduro, izvo zvinobatsira mabhizinesi kushandira vatengi vazhinji, kudzikisa mutengo, uye kupfupisa nguva-kumusika. Lilt inodhura makumi mashanu muzana uye iri katatu nekukurumidza.
Chikuva cheLilt chinopa zvinotevera:
Usambofa Wadzosera MT Maitiro Zvakare - Lilt's inofambidzana, inoshandura muchina shanduro yekushandura inogadziridza yayo yekushandura ndangariro uye MT system mune isingasviki sekondi nguva imwe neimwe muturikiri paanosimbisa chidimbu.
Seamless Kubatana kweVanhu neMuchina - Sanganisa kushandurwa kwevanhu nemuchina nemamwe masisitimu ebhizinesi kuburikidza neyakajairwa-based API. Kana shandisa imwe yeLilt inokura runyorwa rweyetsika yekubatanidza.
Agile Project Management - Kanban Project Dashibhodhi inoita kuti iwe utarise mamiriro azvino emapurojekiti echikwata chako nebasa rekushandura.
Mune ongororo yebofu yakaitiswa naZendesk, vashanduri vakakumbirwa kusarudza pakati peshanduro yeNMT yaLilt uye shanduro yemuchina yaLilt yapfuura (MT). Vashandisi vakasarudza NMT kuti ive yemhando imwechete kana yepamusoro kupfuura shanduro dzekare 71% yenguva.
Tinoda kubatana pakati pemuturikiri wevanhu uye kugona kwavo kudzidzisa maTT engines. Zvaireva kuti patakaisa mari mushanduro dzevanhu, zvaizobatsirawo mukunaka kwemajini edu eMT. Melissa Burch, maneja wekutsigirwa pamhepo paZendesk
Lilt co-founders John DeNero naSpence Green vakasangana vachiri kushanda paGoogle Dudziro muna2011, ndokutanga Lilt kutanga kwegore ra2015 kuunza tekinoroji kumabhizimusi emazuva ano nevashanduri. Lilt inopa mhinduro bhizinesi uye ecommerce dudziro futi.
Tags: kushandurwa kwevanhuliltnzvimbolocalizationmachine learningshanduro yemuchinaneuralneural muchina shanduroneural networkshandurochirongwa chekududzirazendesk
Yako Yekutanga Yekushandisa Brand Yakagadzirira CES? Yakakosha Yekutengesa Yekutarisa Yekutanga-Nguva
Ndiri Kuedza Twitter's Nyowani Nyowani